धमकी दिन अन्डा हाम्रो देश धेरै व्यापक छैन मा छन्। हामी धेरै accustomed साधारण चिकन अन्डा खाने छन्। तिनीहरूले सस्ता छन्, र एक परम्परागत भोजन छन्। तर धेरै देशहरूमा, लामो धमकी दिन अन्डा को साधारण भोजन भएको। तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न र कसरी तिनीहरू उपयोगी, पुरातन समयका देखि ज्ञात छन्।
प्राचीन मिश्रमा, यो पहिले नै मानव शरीर मा आफ्नो लाभदायक प्रभाव याद गरिएको छ। धमकी दिन अन्डा को प्रयोग मा आधारित चिनियाँ चिकित्सा को धेरै व्यञ्जनहरु। पहिलो पटक जापानी के को लागि यो उत्पादन को उपयोगी गुण को सावधान अध्ययन। तिनीहरूले पनि धमकी दिन अन्डा उत्पादन, संसारभरि लोकप्रिय गरे।
धमकी दिन अन्डा हृदय, पेट, अन्तस्करणले र धेरै अन्य अंगहरु मा हड्डी स्वास्थ्य मा एक लाभदायक प्रभाव, खाने। यसलाई मानिसहरू मा प्रोस्टेट ग्रन्थि को कामकाज मा आफ्नो निको प्रभाव लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ। धमकी दिन अन्डा कुनै पनि उमेर मा सकिन्छ। तिनीहरूले मात्र चिकित्सकीय प्रभाव छ, तर पनि निकै निकायको समग्र टोन सुधार।
विशेष गोप्य, त्यहाँ धमकी दिन अन्डा हो, कुनै। यसको स्वाद गुणहरू अनुसार चिकन अन्डा गर्न टाढा उच्च हो। को धमकी दिन salmonellosis संग बिरामी छैनन् किनभने तिनीहरू कच्चा खाया गर्न सकिन्छ। तपाईं एक आमलेट वा तला अन्डा तिनीहरूलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ लामो समयसम्म गर्मी उपचार समयमा तिनीहरूले उपयोगी गुणहरू गुमाउनु भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यो उत्पादन केक बनाउन को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर, को पाठ्यक्रम, सबैभन्दा ठूलो चासो धमकी दिन अन्डा किनभने यसको औषधीय गुण को कारण। कसरी इच्छित प्रभाव उत्पादन कि धमकी दिन अन्डा खान?
शरीर को समग्र टोन सुधार गर्न, तपाईं 4-5 खान आवश्यक कच्चा अन्डा कुनै पनि रस संग मिश्रित। तपाईं एक मिठाई पेय बनाउन एक सानो मह थप्न सक्नुहुन्छ। हरेक बिहान यो ककटेल पिउने, यो पुरा दिन को लागि ऊर्जा र ऊर्जा एक आपूर्ति सुरक्षित गर्न सम्भव छ। यो उत्पादन प्रयोग को प्रभाव दुई हप्ता देखिनेछ।
पाचन प्रणाली र प्रोस्टेट काम समायोजन गर्न, तपाईं प्राथमिकताको खाली पेट, धमकी दिन अन्डा बनेको एक मिश्रण मा, हरेक दिन पिउन गर्न आवश्यक छ। नुस्खा: रक्सी को 30 ग्राम, 3-4 धमकी दिन अन्डा र चीनी को सानो चम्चा। माथि उल्लेख रूपमा यो सबै, को सचेतक लिन र गर्नुपर्छ। यो समयमा सिफारिस गरिएको छ चोकर रोटी रुचाउँछु।
धमकी दिन अन्डा को प्रयोग संग र कपाल लागि कस्मेटिक मास्क गरिरहेको। 5-6 अन्डा लिन र तेल को एक सानो कप (तरकारी वा जैतून) र मह एक कप तेस्रो भाग तिनीहरूलाई पिटे, यो गर्न। यो मिश्रण बाल, र्याप टाउको लागू र एक घण्टा आयोजित छ। त्यसपछि तपाईं एक समाधान संग राम्ररी कुल्ला छ। यस्तो प्रक्रिया बाट बाल, नरम आज्ञाकारी र चमकदार हुन्छन्।
क्याल्सियम कमी संग, र धमकी दिन अन्डा को खोल प्रयोग गर्नुहोस्। यो अन्त गर्न, यो पाँच मिनेट लागि दुई पटक उसिनेर र स्याउ साइडर सिरका खन्याउन। एक दिन पछि, खोल (छैन सूर्य मा) धुन आवश्यक र सुक्खा छ। त्यसपछि यो एक पाउडर मा गोले पीसने गर्न आवश्यक छ। यो पाउडर को ईर्ष्या आक्रमण हटाउन र कपाल र नङ को अवस्था सुधार गर्न एक सानो चम्चा लिन छ।
यो जीव प्रतिरोधी धमकी दिन अन्डा छ कि ज्ञात छ। तिनीहरूलाई मांसपेशी निर्माण गर्न कसरी प्रयोग गर्ने, हरेक Bodybuilder थाह छ। यो हामी (10 अन्डा सम्म) एक समयमा खुराक वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यो संख्या प्रोटिनको धेरै समावेश गर्छ, तर diathesis वा अन्य नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन छैन।
भिटामिन बी, फलाम, पोटासियम, फस्फोरस - सबै धमकी दिन अन्डा समावेश गर्दछ। इच्छित प्रभाव प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने? मुख्य कुरा नियमित र सही मात्रा मा छ। तिनीहरूले कुनै पनि उमेर मा शरीर को अवस्था मा एक लाभदायक प्रभाव छ। धमकी दिन अन्डा को प्रयोग स्नायु प्रणाली को स्थिरीकरण गर्न जान्छ। यो आहार, पौष्टिक र स्वादिष्ट उत्पादन। यस मामला मा, कोलेस्ट्रल मात्र न्यूनतम खुराक धमकी दिन अन्डा समावेश गर्नुहोस्। कसरी यो तपाईं पहिले नै थाहा लाभ कि, यो उत्पादन प्रयोग गर्न। अब यसलाई स्वागत को एक पाठ्यक्रम सुरु र भिटामिन र ऊर्जा संग आफ्नो शरीर प्रदान गर्न आवश्यक छ।
किन कपडा? तालिका लेआउट र डिजाइन cloths।
मह क्लोभर: उपयोगी गुण र contraindications, व्यञ्जनहरु र अनुप्रयोग सुविधाहरू
फिनल्याण्ड देखि पनीर: प्रकार, उत्कृष्ट ब्रान्डहरु को नाम
के vestibular सिस्टम गठन? कसरी vestibular सिस्टम?
घर रोम क्षेत्र - संसारको क्याथोलिक लागि तिर्थयात्रा को ठाउँ
मालिकको राज्य गरेको मनपर्ने चिन्तित छैनन् भन्ने बिरालोहरु को तापमान कस्तो हुनुपर्छ?
आफ्नो हातले शिल्प: कफी सिमी, क्रिसमस ट्री र पोथे्र दम्सी देखि पाठो
स्वतन्त्रता को एक अर्थमा, वा बच्चा क्रल गर्न सुरु गर्दा